INKAMPANI-AOOD Technology limited
Sijolise kwitekhnoloji kunye nokwenziwa kwezinto ezintsha ezisekwe kwisiliphu somvelisi kunye nomthengisi.
I-AOOD TECHNOLOGY LIMITED yasekwa ngo-2000 ukuyila nokuvelisa amakhonkco esiliphu. Ngokungafaniyo nezinye iinkampani ezininzi zemveliso kunye nezokulungisa, i-AOOD iyiteknoloji ejolise kwitekhnoloji kunye nokusekwa okusekwe kwisiliphu somvelisi kunye nomthengisi, sihlala sigxile kwi-R & D yeziphelo eziphezulu ezingama-360 ° izisombululo ezijongayo zorhwebo, ezonyango, ezokhuselo kunye nezicelo zaselwandle.
Umzi-mveliso wethu ubekwe e-Shenzhen yase-China ebaluleke kakhulu kwi-R & D ephezulu kunye nakwisiseko sokwenza e-China. Sisebenzisa ngokupheleleyo ubonelelo lweshishini oluphuhlisiweyo lwasekhaya kunye nezinto ezinokubiza indleko e ukuhambisa abathengi ngokusebenza okuphezulu kwendibano yesilayidi yombane. Sele sihambise ngaphezulu kwe-10000 yeendibano zesilayiti kubathengi kwaye ngaphezulu kwe-70% zilungiselelwe ezenzelwe iimfuno ezizodwa zabathengi. Iinjineli zethu, abasebenzi bokuvelisa kunye neengcali zebandla bazibophelele ekuboneleleni ngemisesane yesiliphu ngokuthembeka okungenakuthelekiswa nanto, ukusebenza ngokukuko kunye nokusebenza.
Iindibano zeeNdibano zeSlip
Sizibona njengeqabane lesiliphu esilixhasa ngokunyanisekileyo abathengi ekudalweni, kuphuhliso olungaphezulu kunye nokuveliswa kweemveliso. Kule minyaka idlulileyo, sinikezela ngomgca opheleleyo wemigangatho yesiliphu esemgangathweni kunye nesiko ukongeza ekunikezeleni ngeenkonzo zokunxibelelana zobunjineli ngokuhambisa kubandakanya uyilo, ukulinganisa, ukuvelisa, ukuhlanganisa kunye nokuvavanya. Amaqabane e-AOOD agubungela usetyenziso olwahlukeneyo lwehlabathi kubandakanya izithuthi ezixhotyiweyo, iziseko ze-eriyali ezisisigxina okanye ezihambayo, ii-ROVs, izithuthi zokulwa umlilo, amandla omoya, oomatshini abazihambisayo, iirobhothi zokucoca indlu, i-CCTV, ukuguqula iitafile njalo njalo. I-AOOD iyazingca ngokubonelela ngenkonzo ebalaseleyo yabathengi kunye nezisombululo ezizodwa zendibano.
Umzi-mveliso wethu uxhobisa ngemveliso ephambili kunye nezixhobo zovavanyo kubandakanya umatshini wokubumba inaliti, umatshini wokugaya, umatshini wokugaya, umvavanyi odibeneyo wesiliphu sokutyibilika, umvelisi ophakamileyo wamandla, i-oscilloscope, umvavanyi odibeneyo we-encoder, imitha ye-torque, inkqubo yovavanyo lokumelana notshintsho umvavanyi wamandla, umhlalutyi womqondiso kunye nenkqubo yokuvavanya ubomi. Ukongeza, sinendawo eyahlukeneyo ye-machining ye-CNC kunye nomasifundisane ococekileyo wemveliso ukuvelisa iimfuno ezizodwa okanye iiyunithi zeringi yomgangatho wokulwa.
I-AOOD ihlala igxile ekuphuhliseni isisombululo esitsha sokudibana kunye nokuhlangabezana nokunyuka kwesicelo esitsha. Nawuphi na umbuzo owenzelwe ngentando yakho wamkelekile.